डिप्रेसन के हो ? यसका कारण र उपचार विधिहरू के-के हुन् ? – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर डिप्रेसन के हो ? यसका कारण र उपचार विधिहरू के-के हुन् ?
हाम्रो मन सधैँ एक एकनासको रहँदैन । कहिले खुसी हुने कहिले दिक्क लाग्ने । कहिले रमाइलो हुने त कहिले निराश हुने । यो कुरा सामान्य हो । आर्थिक नोक्सानी, आफन्तको मृत्यु, व्यापारमा घाटा, परीक्षामा असफलता आदि हुँदा मन सुखी हुनु स्वभाविक हो । कहिलेकाहीँ यत्तिकै पनि २-४ दिनसम्म नरमाइलो लाग्न सक्छ । बिस्तारै आफैँ हराएर जान्छ । तर, दिक्कदारीपनको अवस्थामा मन ज्यादै दुःखी हुन्छ, कुनै कुरामा रुचि हुँदैन ।
– मन उदास-दुःखी-खिन्न हुने,
_ शरीरमा शक्ति नै छैन जस्तो अनुभव हुने, कामकाज नगरे तापनि शरीर तथा धेरै थकाईको महसुस हुने,
– कसैसँग कुरा गर्न-बोल्न-हाँस्न मन नलाग्ने,
– आफ्नो जीवन बेकार-व्यर्थ-काम नलाग्ने जस्तो विचार आउने,
० ध्यानदिनुपर्ने कुरा
– किशोर-किशोरीको पढाइमा, वयस्कले काम तथा जागीरमा, खेलाडीले खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो हो । तर धेरै तनाव लिएर प्रतिस्पर्धा नगर्ने ।
– खुसी हुँदा, हाँस्दा, कुनै कुरालाई सकारात्मक सोच्दा, खेल- मनोरञ्जन-शारीरिक व्यायाम गर्दा, मस्तिष्कमा राम्रो प्रभाव पार्छ, त्यसकारण यस्ता कुराहरुमा सहभागी हुने ।
० आफैँले दैनिक ध्यानदिने कुराहरू
– आफूलाई मनपर्ने कुनै गीत-भजन वा अन्य रमाइलो कामकाज गर्ने,
– रोग फेरि लाग्न नदिन के–के गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउने । जस्तैः दिइएको औषधी नियमितरूपमा खाने, आफूलाई अलिकति पनि व्यवहारमा परिवर्तन आएजस्तो लाग्यो भने फेरि पनि चिकित्सक-स्वास्थ्यकर्मीकोमा जाने, खानपानमा ध्यान दिने, थकाई लागेमा आराम गर्न दिने,